Abenzi nabaphakeli baseChina abapheka inyama ALLCOLD
Isivinini sokupholisa esisheshayo, Kuthatha cishe imizuzu engama-30 ukupholisa kusuka ku-100 ℃ ukwehla kune-10 ℃. Ithempelesha yokuphola engafani maphakathi nendawo ebusweni bokudla. Azikho izidingo ezikhethekile ngosayizi, ukubukeka kanye nemodi yesitaki yemikhiqizo HAYI "ukungcola kwesibili" kokupholisa ekamelweni lensimbi elingenalutho eligcwele ngokuphelele. Ngokushesha ukuthola ibanga lokushisa elingu-25-50 ℃
okulungele kakhulu ukuzala kwamagciwane.
Izipholisi ze-AllCOLD zokuhlanza manje sezisetshenziswa kakhulu ekupholiseni imboni yokudla okuphekiwe njengokupholisa inyama, izinkukhu, irayisi nobhontshisi okwenziwe, imifino, isinkwa, ikhekhe njll. Normal lokushisa chungechunge ukupholisa ukudla azungeze 25 ℃ ~ 30 ℃, ongaphakeme lokushisa chungechunge lokushisa lokugcina kungaba ngaphansi kuka-10 ℃.
1. Ubuchwepheshe obukhethekile be-PCM busetshenziswa ogibeni olubandayo, ukwenza ngcono kakhulu umthamo wamanzi wokubamba ngokumelene nokucekelwa esiqandisini nasosimende lokuhlanza kusuka ekufafazelweni komhwamuko omkhulu wokudla okuphekiwe.
2. Isakhiwo sensimbi engenasici esingenasici samukelwa ogibeni olubandayo ukuze kuthuthukiswe ukwethenjwa kwezingxenye eziyinhloko yimikhiqizo edumile yamazwe omhlaba.
3. Ubuchwepheshe obukhethekile bokulawula ukucindezela ukuze kuxazululwe inkinga yokuphola ekupholiseni imikhiqizo ketshezi nge-PLC ethuthukile nohlelo lokuthinta isikrini, i-Symbol ikhombisa ukusebenza nokusebenza kwesimo, kucacile futhi kulula.
Ukusebenza kwe-Hierarchical ne-cryptoguard kwamukelwa ekusebenzeni kwemishini:
Umsebenzi we-Operation: kuphela kumshini wokuchofoza okhiye (on / off)
Uchwepheshe wokukhiqiza: kusethwa kuphela ngamapharamitha wokucubungula.
Injiniyela: okokulungisa imishini, ukugcinwa kanye nokuxilongwa kwephutha.
5. Uhlelo oluzenzekelayo nolwenziwa ngesandla, ukusebenza nokusebenza komshini kuyaguquguquka futhi kunokwethenjelwa.
6. Okuqukethwe yi-Wacuum chamer yi-SUS304 insimbi engagqwali, eyenzelwe ngokwezidingo ze-GMP.
Langaphambilini Okupholile Ukudla Umshini Cooler